Xiaomi no marika akanjo lafo vidy faharoa eran-tany | Androidsis
Ny ady amin'ny fitarihana eo amin'ny tsenan'ny entina entina dia raharaha orinasa roa: Apple sy Xiaomi. Ireo orinasa roa ireo no orinasa be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao ary mifaninana tsy tapaka amin'ity laharana voalohany ity, amin'ny ankapobeny misy fahasamihafana kely amin'ny varotra. Zavatra mitranga indray amin'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity manerantany. Amin'ity tranga ity, ny marika sinoa dia tokony hipetraka amin'ny toerana faharoa.
Niverina i Xiaomi hijery ny fomba nakan'i Apple ny toerana voalohany varotra manerantany. Na dia mbola kely aza ny fahasamihafana eo amin'ny varotra eo amin'ireo orinasa roa ireo. Ohatrinona ny vidin'ny tsirairay?
Apple dia nahavita satro-boninahitra ho orinasa mpivarotra be indrindra manerantany misaotra ny fivarotana singa 4,7 tapitrisa. Ny orinasa Cupertino, izay mivarotra famantaranandro amin'ity fizarana ity, dia mitazona hatrany ny varotra matanjaka sy ny lazany amin'ity sehatra ity. Zavatra izay hitombo amin'ny faran'ny taona miaraka amin'ireo famantaranandro vaovao.
Etsy ankilany, Xiaomi dia nijanona teo amin'ny laharana faharoa. Ny marika sinoa dia somary latsaka ny vidiny, amin'ity tranga ity 4,2 tapitrisa singa amin'ny haba sy famantaranandrony. Na dia tsy maintsy ao an-tsaina aza fa maro amin'ireo akanjo anaovan'ny mpanamboatra sinoa no tsy misy manerantany.
Ohatra tsara amin'izany ny Xiaomi Mi Band 3, ny fehin-tànana farany indrindra. Taorian'ny fampisehoana azy tamin'ny Mey, misy tsena marobe izay mbola tsy misy amin'ny fomba ofisialy. Ka rehefa mahazo ny fisian'ny tsena izy dia ho hitantsika ny fitomboan'ny varotra Xiaomi.
Ao amin'ity lisitra ity dia omen'ny Huawei ny fahagagana lehibe. Ny mpanamboatra sinoa no nitombo indrindra, miaraka amin'ny fisondrotana 118% raha oharina tamin'ny taon-dasa. Fisondrotana lehibe eo amin'ny varotra, izay ahazoan'ny marika marika ity fizarana ity. Amin'izao fotoana izao dia izy ireo no marika amidy fahefatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi dia mijanona ho marika faharoa azo amidy indrindra
Amazon dia manolotra ny takelaka Fire HD 8 vaovao, ny taranaka vaovaon'ny vokatra iray izay mivarotra toy ny donat
Honor Band 4, efijery AMOLED ary fanaraha-maso ny tahan'ny fo mitohy